Furitaankii ugu horreeyay ee iPhone 13 Pro ee midabka dahabka ah | Wararka IPhone
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee furitaanka iPhone 13 ee dahabka ah ayaa ka muuqda shabakadda oo laga yaabo inaysan ahayn in la daabaco dhowr maalmood, laakiin ma aysan ahayn. Kani waa mid ka mid ah fiidiyowyadaas oo hubaal ah inay helaan malaayiin booqashooyin ah oo aan si sax ah u ahayn tayada tafatirka. Fiidiyowgaan waa kii ugu horreeyay ee lagu daabaco shabakadda iyo in wuxuu muujinayaa furaha sanduuqa cusub ee iPhone 13 Pro Max.
Waxaan hubnaa in iPhone 13 -ka cusub uu yeelan doono cajalado fiidyowyo ah oo wanaagsan shabakadda oo aan si sax ah loogu samayn kaamirooyinkeeda xoogga badan. Fiidiyowyada noocaan ah mar walba waa la jecel yahay iyo haddii aad tahay qofka ugu horreeya ee kula wadaaga shabakadda bulshada ee YouTube hubi in aad hesho sacab muggiis oo wanaagsan.
Kanaalka YouTube SalimBaba Technical, Wuxuu mas'uul ka ahaa daabacaadda fiidiyowgan si macquul ahna wax xiriir ah kuma lahan fiidiyowyada unboxing -ka ee iJustine ama Marques wanaagsan oo hore. Si kastaba ha noqotee waa taas, eeg waxa ku jira sanduuqa qaab cusub oo iPhone 13 ah, kiiskan oo ah nooca Pro Max ee dahabka ah. Waa kan fiidiyaha:
Fiidiyowgu wuxuu si cad u muujinayaa waxa lagu daray sanduuqa qaabka cusub ee iPhone 13 Pro Max. Fiilada lacag -bixinta, tilmaamaha yar -yar oo waa intaas. Furashada sanduuqan cusub ee iPhone 13 waxay ina xusuusineysaa qaabkii hore ee iPhone, 12. Nooca xeedho laguma darin sanduuqa. Toddobaadkan waxaan bilaabi doonnaa inaan aragno fiidiyowyo badan oo la mid ah kan, si kasta oo ay tahay waxaan rajeyneynaa in la daabaco waxoogaa ka shaqaynaya in kasta oo aysan muhiim ahayn maadaama iPhone 13 uusan ku darin wax cusub oo ka baxsan wixii aan ku aragnay qaabkii hore.
Xusuusin ahaan ma soo bandhigi karaan haddii dhejisyada Apple ay ku jireen midab dahab ah? 😄
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Furitaankii ugu horreeyay ee iPhone 13 Pro dahab ah